Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): မင်း​အောင်​လိုင်​ရဲ့လုပ်​ရပ်​အားတရုတ်​တုံ့ပြန်​
at 11/27/2016 09:57:00 AM
Buga Shi Shanan
မင်း​အောင်​လိုင်​ရဲ့လုပ်​ရပ်​​ကြောင့့်​တရုတ်​အစိုးရအလွန်​​ဒေါပွ​နေပြီလို့သိရပါတယ်​၊ သည်​အ​တောအတွင်းတရုတ်​ထံမှချည်းထားတဲ့အ​ကြွေးတွေမြန်​မာအစို့ရကအမြန်​မဆပ်​နိုင်​ဘူးဆိုရင်​တရုတ်​ကတီးမခံနိုင်​​တော့ဘူး လို့ကြားရပါတယ်​၊ တရုတ်​ကိုမလိမ့်​တပတ်​​လိမ်​လည်​ခဲ့တဲ့ဗမာအစို့ရရဲ့လုပ်​ရပ်​အားတီးမခံနိုင်​​တော့တဲ့တရုတ်​ဟာသူရဲ့တပ်​အင်​အား (၄၀၀၀) ​လေး​ထောင်​နင့်​ဒုံးတပ်​Tank ကားများမုံးကိုးဒသနင့်​ နယ်​စပ်​တ​လျှောက်ပို့ထား လိုက်​ပါတယ်​၊ မင်း​အောင်​လိုင်​ရဲ့တပ်​မ​တော်​ကိုဆုံး မဖို့ဖြစ်​​ကြောင်းသိရပါတယ်​။ ဥ​ရောပ ခရီးစဉ်​အတွင်းပြခဲ့တဲ့တပ်​မ​တော်​ရဲ့ပြရုပ်​ဟာဘာလဲဆိုတာ​ပေါ်လွင်​ထင်​ရှားလာပါတယ်​။ ​အခုတ​လောကချင်​ပြည်​နယ်​ ၁၀၅ အ​မျောက်​တပ်​ရင်းနင့်​ မပခ တိုင်းချုပ်​ဝင်း​အတွင်း​ရောက်​​နေတဲ့အ​နှောက်​တိုင်း​သားရုရှားစစ်​လက်​နက်​နည်းပြများအကြာင်း​တရုတ်​​ထောက်​လှန်း​ရေးများအနီးကပ်​​စောင့်​ကြည့်​​နေပါ​ကြောင်း​သိရှိရပါ
သည်​။ တပ်​မ​တော်​ရဲ့လုပ်​ရပ်​​ကြောင့်​ ​ဒေါ်စု နိုင်​ငံတ ကာမှာမျက်​နားပြတ်​ရသလို NLD ပါတီလဲရစရာမရှိ​လောက်​​​အောင်​ဝေဖန်​ခံ​နေရပါတယ်​။ စစ်​ဖိနပ်​​အောက်​​ရောက်​​နေတဲ့ NLD အစိုးရအားပြည်​သူများ၏အင်​အား ဖြင့်​သာကယ်​ထုပ်​နိုင်​လိမ့်​မြည်​ဖြစ်​ပါ​ကြောင်းအသိ​ပေးလိုက်​ပါသည်​။
UNFC အနနေဲ့ အငျအားကို ပွနျစုစညျးသငျ့
Two police officers were caught by the Northern Al...
ကခငျြသီခငျြး ကို တအောနျးစာသားဖွငျ့ပွနျဆို (dumtim ...
M.A.A. မှာ ဗဟိုကော်မတီသစ်ကို တင်မြှောက်ခြင်း
Republic of Ethnic Nationalities Union Council
Mei Song Republic PartyaWeb-site
အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကေအိုင်အေတပ်မဟာ ၆ရဲ့နေဂိုကို...
အမြဲသတိရှိဖို့ နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရန်အသင့်ဖြစ်ဖို့ မိန...
ကရင်​ မျိုးဆက်​သစ်​ ခ​လေး​မျာ ​ကျောင်း မတက်ပဲ ဆန္ဒ...
25.11.2016 (N gun ja wa) Myanma Tatmataw is using ...
သင်​ရိုးညွန်းတမ်းမှာာ မပါ​သော သမိုင်းမှန်​များ ...
TNLAဗိုလ်မှုးကြီးတာဖုန်းကျော် VS စစ်ခွေးလူထွက် လ...
အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ဆုိုတာ ဗမာအမျိုးသားကြားထဲက ...
NLD နာယက ဦးတင်ဦးအတွက် မေးခွန်း(၄)ချက်
ငါတို့ဗမာ တွေကိုမမုန်းဘူး၊ အာနာရှင် ကိုဘဲမုန်းတယ...
Many who are eager what President-elect Trump's po...
မုံးကိုး နယ်စပ်ဂိတ်၊မဟာမိတ်တပ်များ ထိန်းချုပ်
A.KIA.MADAA.TILA ထိုးစစ်ဆင် တိုက်နေတာ အားရစရာ
တကယ်တော့ မုံးကိုး၊ ဖောင်းဆိုင်၊ ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း)...
23/11/2016 Ya Na Padang Shiga Ni
မန်မာစစ်သားများ အရပ်သားကားများဖြင့် မှုဆယ် ဘက်သို့...
ခံရလို့ ပြန်ချတဲ့ခါ ရန်စတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့
UWSA says ''we are ready for the long fight.''
တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတဲ့ ကြားထဲမှာ အသက် ကို စပယ်ယာပတ်စ် ...
အဲဒီ တုန်းက ဂျနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်း သမားတွေ ဘယ်ဂျောင်...
မာက်ပိုင်တပ်ပေါင်း စုကြီးကို ထောက်ခံသောပြည်သူများ ...
· မနေ့ကတော့ သင်ခန်းစာ တခုရလိုက်တယ်။
FUA Northern Command
တို့တွေ KIA ဟာ ဗမာကို မမုန်းဘူး
ဖိတိုက်နေတဲ့ ဗမာတပ်တွေကို .စစ်ကစားမယ်၊
Karai Masa Hku Wupoang mung dan shang lawt lu na l...
Karen in America held demonstration in front of th...
အဲနိုင်ငံအတွက် အင်မတန်မှ အန္တရာယ်များလှပါတယ်
ခေါင်းက လုံပေမဲ့ ဖင်တော့ ပေါ်နေတယ် မအလ
Trump: No Salary for Me as President.
စိတ္တဇရောဂါ စွဲကပ်နေတဲ့ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်များ
Burma claims to beademocracy but lacks freedom o...
ပင်လုံပြီးနောက် ကချင်တွင် တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၅၀ ကြိမ်...
Gum San NSang feeling annoyed. Masha hpan nkau hp...
U.W.S.P/ U.W.S.A ပြောက် ကျား training ပါ ။
ငါတို့သားအဖလည်းရှည်ရှည်ဝေးဝေးစဉ်းစားမနေပဲ Donald T...
WE LOVE KIO,KIA